5/31/2014 07:57:00 PM funny
စကားတတ်တဲ့ ကြက်တူရွေးတစ်ကောင် ရှိတယ်
ခုရက်ပိုင်း ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူး အစာကျွေးတဲ့
ဧည့်သည်လာရင်လည်း မပြန်မခြင်း ဆဲဆိုနေတယ်
ဒါနဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ကို သွားပြကြည့်တာ
ဆရာက စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်ပြီးတော့ ပြောတယ်… …
“ခင်ဗျားကြက်တူရွေးက အထီး၊ မိတ်လိုက်ချင်နေတာဗျ”
“ဟုတ်တယ်၊ အတော်ပဲဗျ ကျနော့်မှာလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကြက်တူရွေးအမလေး ရှိတယ်”
“ဒါပေမယ့် မိတ်လိုက်ခ ၁၅ ဒေါ်လာတော့ ပေးရမယ်”
၁၅ ဒေါ်လာပေးရမှာဆိုတော့ ပိုင်ရှင်က အင်တင်တင်လုပ်နေတယ်
ဒီတော့ သူ့ကြက်တူရွေးက စိတ်မရှည်ဘူးထင်ပါရဲ့ ထအော်တယ်… …
“လုပ်လေ လုပ်လေ လုပ်လေ”
ကြာရင်ပိုဆိုးမှာ စိုးလို့ ၁၅ ဒေါ်လာပေးလိုက်တယ်
ဒါနဲ့ သူ့ကို ကြက်တူရွေးမ လှောင်အိမ်ထဲထည့်ပြီး လိုက်ကာနဲ့ကာပေးလိုက်တယ်
ချက်ခြင်းပါပဲ ကြက်တူရွေးမ ငယ်သံပါအောင်အော်ပြီး လှောင်အိမ်ထဲကနေ အမွေးအတောင်တွေ လွင့်စင်ထွက်လာတယ်
ဆရာဝန်လည်း ဘုရားတပြီး လိုက်ကာကို ဆွဲဖယ်ကြည့်လိုက်တော့
ကိုယ့်အကောင်က ကြက်တူရွေးမကို လှောင်အိမ်ကြမ်းပြင်မှာ ချနင်းထားပြီး အမွေးတွေ ဆွဲနုတ်နေတာကိုး
ဆရာဝန်က အော်တာပေါ့… …
“ဟာ ဒီအမျိုးယုတ်ကောင် ဘာလုပ်တာလဲဟ”
ဒီတော့ ကြက်တူရွေးက ပြန်ပြောတယ်… …
“၁၅ ဒေါ်လာနဲ့တန်အောင် ခင်ဗျားကောင်မကို မိတ်မလိုက်ခင် ကိုယ်လုံးတီးချွတ်နေတာလေ” တဲ့။
” Oိာန် ”
5/31/2014 07:55:00 PM funny
ဒီနေ့တော့.. မစားရတာကြာပီဖြစ်တဲ့ ကြက်သားဟင်းလေး ချက်စားမယ်ဆိုပြီး.. ဈေးထဲကို ဟင်းဝယ်ထွက်လာခဲ့တယ်။
ဈေးထဲရောက်တော့.. ကြက်သားရောင်းတဲ့ ဆိုင်ရှေ့မှာ ရပ်လိုက်ပြီး…
” အမကြီး.. ဒါ.. ဘယ်ဈေးလဲ..ငှင်..!!! ”
” အွင်..! ဒါတော့ သိတာပေါ့ဂျ.. ကြက်သားဈေးကို..မေးတာ..! ”
” အာ့ဆိုလည်း.. ကြက်သား ဘယ်ဈေးလဲ.. မေးပေါ့ဟဲ့..! တစ်ပိသာကို..၆၀၀၀ ဈေး..! ”
” အားပါး..ဈေးကလည်း.. ကြီးပါ့..! ”
” သြော်ဟယ်.. သူ့ခမျာ နင်ဟင်းအဖြစ်စားဖို့ အနစ်နာခံပြီး.. အသက်တောင် အသေခံပေးထားရတာ..လေ..။ တန်ပါတယ်..ဟဲ့. ! ”
” အွင်..ဟွတ်ကဲ့ပါဗျာ..ကျနော်တော့ အမကြီး ဘော်ဒီထဲမှာ မျောသွားပီးဗျာ..”
” ဘာ..ပြော..ဒယ်..!!! ”
” အဲ..မှားလို့.. တော်ကီထဲမှာ မျောသွားဒယ်.. ပြောထှာ..အဟီး..”
” ဟွင်း..ဒါဆို.. ဘယ်လောက်သား ယူမတုန်း…! ”
” အွင်း…တစ်ပိသာကို ၆၀၀၀ ဆိုတော့… ၁၀ သားကို ၆၀၀..ပေါ့..။
အာ့ဆို..၅ ကျပ်သားပေးဗျာ..! ”
” ဘာ..!!!! ဒါ..ရွှေရောင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး.. ဟင်းသားရောင်းနေတာ.. အနည်းဆုံး ၁၀ သားပဲရောင်းတယ်”
” ငင်..အေးပါဗျာ.. အာ့ဆိုလည်း..၁၀ သားပေါ့.. ဒါနဲ့.. ရေတော့ မထိုးထားပါဘူးနော်..! ”
” နင်တောင်.. အသက်ရှင်ဖို့အတွက်.. ရေသောက်သေးတယ် မဟုတ်လား..အေး..အဲ့လိုပဲ.. သူလည်းသောက်တော့.. ရေပါမှာပဲ..ဆန်းသလား..ဟဲ့..! ”
” ငင့်..! အွင်းပါဗျာ..!!! ”
credit: FM Radio
တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြဿ နာတွေ ဖြေရှင်းပြီးရင် စစ်တပ်က တပ်နေရာပြန်မည်ဟု ထိုင်းစစ်တပ်ပြော
5/31/2014 07:53:00 PM thai-news
ထိုင်းအာဏာသိမ်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် အနည်းဆုံး ၁ နှစ်လောက်ကြာနိုင်ပြီး အဲ့ဒါနောက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ်လို့ မေလ ၃၀ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘယ်လိုမှ ရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပြီးရင် စစ်တပ်က စစ်တပ်နေရာပြန်မှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောဆိုပါတယ်။
မေလ ၃၀ ရက်နေ့က ရုပ်မြင်သံကြားကနေ တိုင်းပြည်ကို ပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းမှာ ထိုင်းစစ်တပ်က အချိန်၁နှစ်နဲ့ ၃ လ အချိန်ယူဖို့ သတ်မှတ်ထားပြီး ပထမ ၃ လက အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို အဓိကထားဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်ကာလ ၁ နှစ်မှာ ကြားဖြတ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို အကောင်အထည်ဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုပြီးစီးရင် ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပေးပြီး စစ်တပ်က မူလနေရာကို ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။ ဒီကာလအတွင်း ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေကို လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ထိုင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က သတိပေးပါတယ်။
မေလ ၂၂ ရက်နေ့က ထိုင်းစစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့အပြီး နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရပညာရှင်တချို့ကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုမလုပ်ဖို့ သတိပေးတားမြစ်မှုတွေလုပ်ပြီး ရက်သတ္တပတ် ၁ ပတ်အတွင်း ထိန်းသိမ်းခံရသူ ၃၀၀ လောက်ကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မေ ၃၀ ရက်နေ့ကတော့ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဖြစ်ပွားတဲ့ ဘန်ကောက်မြို့က အဓိကလမ်းဆုံတခုကို ဆန္ဒပြပွဲတွေမဖြစ်အောင် ၂ ရက်ဆက် ပိတ်ဆို့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။
5/31/2014 07:52:00 PM sport-news
၂၀၁၄ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလား အုပ်စုတွင်း သုံးသပ်ချက်တွေ တင်ဆက်ပေးနေရာမှာ ဒီနေ့တော့ အုပ်စု(ဃ) သုံးသပ်ချက် တင်ဆက်ပေးပါမယ်။
ဒီအုပ်စုမှာ ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တဲ့ အသင်းကြီးတွေ မြန်မာပရိသတ်အကြိုက် အင်္ဂလန်အသင်းတို့ ပါဝင်နေတာမို့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အုပ်စုလို့ ပြောရမှာပါ။
အသင်းလိုက်နာမည်ကြီးပြီး အရှိန်အ၀ါရှိတဲ့ ဥရုဂွေး၊ အီတလီတို့နဲ့အတူ အင်္ဂလန်နဲ့ ကော့စတာရီကာ အသင်းတို့ အုပ်စု (ဃ)မှာ ပါဝင်နေပြီး အုပ်စုအနေအထားအရ အင်္ဂလန်အသင်း အုပ်စုတက်ဖို့ မလွယ်ဘူးလို့ အိုလံပစ်အားကစားဂျာနယ် အယ်ဒီတာ ကိုဟိန်းသန့်က ပြောပါတယ်။
“အင်္ဂလန်အသင်း လက်ရှိအနေအထားနဲ့ဆိုရင် အင်္ဂလန် အုပ်စု တက်ဖို့ နည်းနည်းခက်လိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီအုပ်စုမှာ အီတလီက မထင်မှတ်တွေ လုပ်ပြတတ်တဲ့ အတွေ့အကြုံများ တယ်။ နောက် ကစားသမား ပိုင်းကျတော့ အီတလီရဲ့ ကစားသမားအင်အား နည်းနည်းတောင့်တယ်။ အင်္ဂလန်ကျတော့ ဒီနှစ်ရွေးထားတဲ့ လူတွေက များသောအားဖြင့် လူငယ်တွေ များတယ်။ အထူးသဖြင့် တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင် အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူဆိုလို့ ရိုနီ တယောက်ပဲ ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ကစားသမားတွေက လူငယ်တွေများတော့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဥရုဂွေး၊ အီတလီ အဲဒီ ၂ သင်းကို ကျော်ဖို့ သိပ်မလွယ်လှဘူး။”
ဥရုဂွေးက ဆွာရက်နဲ့ အီတလီက ဘာလော့တယ်လီတို့ စောင့်ကြည့်ရဖို့ရှိပြီး ဆွာရက်ကတော့ ဒဏ်ရာကြောင့် ပွဲဦးထွက်ပွဲ ကစားဖို့ မသေချာသေးပါဘူး။
ဇွန်လ ၁၄ ရက်မှာ ဒီအုပ်စုပွဲစဉ်တွေ စတင်မှာဖြစ်ပြီး ဥ